Ahoana ny fomba fanesorana ireo fanamarinana faka amin'ny iPhone na iPad | Vaovao IPhone
Betsaka aminareo no hahalala ny resabe farany momba ny Apple sy ny mari-pankasitrahana faka. Ny orinasa Cupertino dia nanala ireo blocker an-tsokosoko maro be avy amin'ny App Store izay niorina tamin'ny asany tamin'ny fametrahana mari-pankasitrahana faka, satria izy ireo dia mety hitera-doza ho an'ny tsiambaratelo sy ny filaminan'ny mpampiasa, farafaharatsiny nilazan'izy ireo izany avy amin'ny Apple hanamarinana fanesorana azy. Na izany aza, mora be ny manaisotra ireo taratasy fanamarinana faka ireo amin'ny fitaovantsika amin'ny alàlan'ny fampiharana iPhone Settings, Ao amin'ny iPhone News androany dia mampianatra anao ny fomba fanafoanana azy ireo ao anatin'ny iray minitra ary tsy misy fahalalana momba ny iOS.
Raha ny tena izy dia tsy mihoatra ny fanesorana ireo piraofilina tsotra napetraka ao amin'ny iPhones-nay, ny lohahevitry ny "profiles" dia toa ny Shinoa amin'ny maro, fa ireo izay nampifandray ny fitaovany amin'ny tambajotra Enterprise WiFi miaraka amin'ny iPhone na avy amin'ny ampahany lehibe amin'ny oniversite any Espana dia ho fantatr'izy ireo tsara izay lazainay. Ireo mombamomba ireo dia toy ny mariky ny fitaovantsika, ary avelao izahay hahafantatra ny tenantsika soa aman-tsara amin'ny lafiny maro. Mba hanafoanana ireo taratasy fanamarinana faka tsy ilaina dia tsy maintsy esorintsika tsotra izao ireo profil napetraka izay mamorona tsy fandriam-pahalemana mora sy haingana.
Ahoana ny fomba fanesorana ireo taratasy fanamarinana faka amin'ny iPhone
Ampidirinay ny fampiharana ny Fikirana avy amin'ny fitaovana iOS.
Tsindrio ilay faritra General.
Misafidy ny safidy eto ambany isika mombamomba.
Azontsika atao ny mandinika ireo mombamomba, raha toa ka tsy misy ny miseho na ny fahatokisanay dia tsara kokoa izany, tsy misy tokony hatahoranay na hanonganana mari-pankasitrahana manimba ny filaminantsika.
Tsindrio ny piraofilina ary misokatra ny antsipiriany.
Rehefa tafiditra ao anatiny dia mivadika mena ny farany «mamafa profil", tsotra toy izany.
Raha vantany vao voatsindry ny bokotra hamafana dia hanontany anay ny kaody fiarovana antsika, ary aorian'ny fidirana azy dia hivaha ny olana, hofafana ny profil ary ho vita isika. Manantena izahay fa nanampy anao izany.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » Fampianarana sy torolàlana » Ahoana ny fomba fanesorana ireo fanamarinana faka amin'ny iPhone na iPad anao
Diego t dia hoy izy:
Tsy azoko ny safidin'ny profil
Mamaly an'i Diego t
Cocacolo dia hoy izy:
Izaho na xD
Mamaly an'i Cocacolo
Tokony hivoaka alohan'ny safidy farany dia "avereno"
- Ampifanaraho amin'ny iTunes amin'ny alàlan'ny Wi-Fi
Raha teôria, raha manana mombamomba ny VPN ianao dia hiseho eo ambanin'ny VPN ho "profil"
Tsy manana na inona na inona eto ambany fotsiny VPN aho ka tsy nametraka mombamomba ahy, saingy tadidiko ny namoronana iray rehefa nigadra iPhone 4 aho.
Ahoana no fomba hamafana ny mombamomba izay tsy miseho ny safidy hamafana ny mombamomba
TOA TOA IZAY TAHAKO FA DANI
Tsy hitako ny safidy hamafana ny mombamomba azy, nilaza fa voasakana izy io ary tsy afaka hofafana! Marina izany??
Toy izany koa no mitranga amiko, tsy mahazo Profiles aho, aiza no hamafana azy ireo ???
Azonao atao ny manala ireo mombamomba ny mdm amin'ny iphone na iPad, tsy azoko, tsy avelany aho ary raha ampifandraisiko amin'ny pc dia tsy fantany.
Ahoana ny famindrana ny angon-drakitrao momba ny fahasalamana amin'ny iPhone vaovao nefa tsy averinao